Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IPort Royal kwiShedyuli entsha yeNqanawa yeMontego Bay
Ukuhamba ngenqanawa eJamaica
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, utyhile ukuba i-TUI, eyona nkampani inkulu kwezokhenketho emhlabeni, yongeze iPort Royal kwishedyuli yabo kaJanuwari 2022. Ucacisile ukuba inkampani iqinisekisile ukuqala kwakhona kweenqwelomoya kunye neenqanawa zabo eJamaica, ngemisebenzi yokuhamba ngenqanawa ecwangciselwe ukuqala ngoJanuwari. Inkampani ichaze ngokuthe ngqo izicwangciso zokungenisa ekhaya eMontego Bay, kunye nokufakwa kweefowuni ePort Royal kwishedyuli yabo yokuhamba ngenqanawa.
I-TUI, enye yezona ndawo zinkulu zabasebenza kukhenketho eJamaica kunye namaqabane kwicandelo lokusasaza kushishino lokhenketho, iqinisekisile imisebenzi yokugoduka ngenqanawa eMontego Bay.
Abaphathi beenkampani abavela kwi-TUI bacebise ukuba idatha yabo ibonisa ukuba ibango lokuhamba ngenqanawa ukuya eJamaica liphezulu.
Umthamo womoya ngeli xesha lasebusika uyakuba ngama-79,000, engaphantsi nje nge-9% kunamanani asebusika e-pre-COVID.
Esi sibhengezo senziwe eDubai kutsha nje, ngethuba lentlanganiso ebandakanya uMphathiswa uBartlett, uMlawuli wezoKhenketho uDonovan White, kunye nabaPhathi beQela le-TUI: UDavid Burling - iiNtloko zeNtloko zeMarike kunye neeNqwelomoya, kunye noAntonia Bouka - iNtloko yezoBudlelwane bukaRhulumente kunye noMgaqo-nkqubo woLuntu-Iindawo.
“Namhlanje i-TUI, enye yezona ndawo zikhulu zabasebenza kubakhenkethi kunye namaqabane kwicandelo lokusasaza kushishino lokhenketho, iqinisekisile imisebenzi yokugoduka ngenqanawa eMontego Bay. Okubaluleke ngakumbi kukuba inani lotyelelo olucwangcisiweyo kunye neminxeba kwiPort Royal Cruise Port, ukuqala ngoJanuwari. Silindele ukuba neefowuni ezintlanu ukusukela ngoJanuwari ukuya ku-Epreli 2022 ePort Royal, utshilo uBartlett.
Ngexesha leengxoxo neTUI, abaphathi beenkampani bacebise ukuba idatha yabo ibonisa ukuba ibango lokuhamba ngenqanawa liphezulu kwaye bakwazile ukugcina ukubhukisha okurhoxisiweyo. Babelane nokuba amandla omoya ngeli xesha lasebusika aya kuba yi-79,000, eyi-9% kuphela engaphantsi kunamanani ebusika e-COVID.
UBartlett uqinisekise abaphathi be-TUI ukuba Jameyikha ihlala iyindawo ekhuselekileyo eneemeko eziphantsi kakhulu zothumelo lwe-COVID-19 kwiipaseji ezomeleleyo, kunye nephulo lokugonya abasebenzi bezokhenketho.
“Iphulo lethu lokugonya abasebenzi lisebenze kakhulu eJamaica, uninzi lwabasebenzi bethu lukhetha ukugonywa ngokupheleleyo. Sinethemba lokuba kungekudala sizakubhiyozela i-30-40% yabasebenzi bezokhenketho baseJamaica abagonywayo kunye nokonyuka okubonakalayo kugonyo lwabemi beli ngoJanuwari, ”utshilo uBartlett.
Umphathiswa u-Bartlett uqaphele ukuba yena neqela lakhe, babeneengxoxo namanye amaqabane aphambili eDubai malunga nezicwangciso zokutyala imali kwimveliso yezokhenketho ePort Royal.
Ndibe nezinye iingxoxo ezibalulekileyo malunga nePort Royal, enokuthi ibone umsebenzi omninzi oza kwenzeka kwintsalela yonyaka. Ndisandul 'ukugqiba iingxoxo kunye ne-DP World, enokubangela ukuphucuka okubonakalayo kwezithuthi zaseYurophu ezingena kwiCaribbean, ikakhulu eJamaica, nePort Royal yeyona ndawo iqwalaselwayo, utshilo uBartlett.
“Ndonwabile ziingxoxo zethu ukuza kuthi ga ngoku eDubai kwaye ndiyilindele lonto IJamaica iya kubona utyalomali olubalulekileyo kwezi ndibano apha, ”wongeze watsho.
I-DP yeHlabathi yinkampani ye-Emirati yamanye amazwe esekwe eDubai. Umbutho ugxile kulungiselelo lwempahla, iinkonzo zaselwandle, imisebenzi yesiphelo samazibuko kunye nemimandla yorhwebo yasimahla. Yenziwa kwi-2005 emva kokudityaniswa kweGunya leZibuko laseDubai kunye neDubai Ports International. I-DP yeHlabathi ilawula izikhongozeli ezizizigidi ezingama-70 eziziswa ngeenqanawa ezingama-70,000 ngonyaka, ezilingana ne-10% yezithuthi zekhonteyina zehlabathi ezibalwa zizikhululo zazo zaselwandle ezingama-82 ezikhoyo kumazwe angaphezu kwama-40. Kude kube ngo-2016, i-DP yeHlabathi yayiyeyona ndawo yokusebenza kumazibuko ehlabathi, kwaye ukusukela ngoko ifumene ezinye iinkampani phezulu nasezantsi kwikhonkco lamaxabiso.